Ishaywe yakhumbula ekuzeke esigabeni esikhulu iSwallows - Impempe
Ishaywe yakhumbula ekuzeke esigabeni esikhulu iSwallows
Umqeqeshi weSwallows, uBrandon Truter
Uwashiswe ijezi yiTshakhuma Tsha Madzivhandila (TTM) kwiNedbank Cup wabuyela kwamhlaba wakhumbula ukuthi akakafiki esibalweni esiqinisekisa ukuthi uselivikile izembe kwiDStv Premiership umqeqeshi weSwallows FC, uBrendon Truter.
ISwallows ishaywe okokuqala kuyona yonke imiqhudelwano kule sizini yiTTM ngo 4-3 sekukhahlelwa amaphenathi emdlalweni wesigaba sesibili kwiKe Yona ngoLwesihlanu ePeter Mokaba Stadium.
Umdlalo ubuphele kungu 2-2 kodwa umqeqeshi weSwallows ukholwa ukuthi bekufanele bawunqobe babulawa ukuba buthuntu kwabagadli.
Kusukela iSwallows ikhuphukele esigabeni esikhulu, i-TTM ibe iqembu lokuqala ukuyishaya ngokwahlukana kwemiqhudelwano yize iyishaye emaphenathini.
Ngenxa yaleyo fomu akwethusi ukuthi iSwallows ibalwa noMamelodi Sundowns neSuperSport United kwabhekwe embangweni wesicoco seligi.
Kuyethusa-ke nokho ukuthi uTruter ukhumbule ukuthi konje abakafiki emaphuzwini angu-35 (okuyisona isibalo esikhomba ukuthi usuke usulivikile izembe kwiDStv Premiership) kodwa uma uzokhumbula ukuthi iSwallows isendaweni yesithathu nje, inamaphuzu angu-30 uzobona ukuthi kungani (lo mqeqeshi) ekhuluma kanje.
“Asizixaki ngendawo esikuyo kwiligi siyazi ukuthi iseyinde indlela okumele ihanjwe bese kuba ima kukhulunywa indaba yesicoco. Manje imidlalo sisayibheka ngayodwana ukuze singazitholi sesiphaphela amagwava aluhlaza.
“Siyazi abantu bazitshela ukuthi siphephile ezembeni ngala maphuzu esesiwaqoqile kodwa iqiniso ukuthi asashoda ngambalwa ukuqinisekisa ukuthi sesilivikile (izembe),” kusho yena.
U-Truter uyaqonda ukuthi sekuzoqala manje kuqine emidlalweni yeligi kwazise isizini isiya ngasemaphethelweni.
“Kumele siqale manje sikhombise ukuthi singobani kule ligi kodwa kufanele siqale ngokulungisa indaba yokungawashayi amagoli anele neyokungenelwa alula ngesikhathi esifanayo.
“Kusibulele nokulimala kwabadlali ezikhathini eziningi ezahlukene kuphinde kube indaba yamakhadi nawo abesikhubaza kodwa ngithemba ukuthi sekuzothi ukwehla manje siphelele ngendlela isikimu.
Mayelana nomdlalo weligi olandelayo neTS Galaxy kuhambeni ngoLwesibili, uthe: “Akukho okutheni engingakusho ngalo mdlalo ngoba sinosuku olulodwa lokuwulungiselela.
“Bakhona abadlali abadonsekile kodwa sizobabheka kahle bonke sibone ukuthi singaqinisa kuphi ukuze sikhiphe iqembu elizobhekana neTS Galaxy okuyiqembu elinzima ikakhulukazi uma lisekhaya.
Mayelana nokuphuma kwiNedbank, uTruter uthe: “Bazodlula kulokhu abadlali bami ngoba ukhakhayi lwabo luqne ngokwanele.
“Senze amaphutha amaningi engingawajwayele kulo mdlalo esikhishwe kuwona kodwa akufanele sifake amakhanda phansi ngoba futhi asizange sihlulwe,” kusho uTruter.
Previous Previous post: Amahlebezi ngekusasa likaBarker kwiStellenbosch kubonakala owayeqeqesha iChiefs eKapa
Next Next post: Ukubambisana yikho okuletha impumelelo kwiTshakhuma – Maleka